Vokatry ny Fanahy: Fifaliana
Miezaha Hanam-pinoana sy Hankatò toa An’i Noa sy Daniela ary Joba
Mahafantatra Tsara An’i Jehovah toa An’i Noa sy Daniela ary Joba ve Ianao?
TANTARAM-PIAINANA Hain’i Jehovah ny Zava-drehetra
Ahoana Izany hoe Olona Araka ny Fanahy?
Miezaha mba ho Olona Araka ny Fanahy
Avy Amin’Andriamanitra ny Fifaliana
FANTARO NY TANTARANTSIKA Nahatonga ny Vaovao Tsara Hiely Tany Irlandy ny Lahateny
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Bassa (Cameroun) Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kabuverdianu Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mixtèque (Guerrero) Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Sepulana Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Febroary 2018
SAMY te ho faly ny ankamaroan’ny olona. Miatrika olana “tsy mora setraina” daholo anefa isika amin’izao andro farany izao. (2 Tim. 3:1) Lasa tsy faly intsony ny olona sasany, satria iharan’ny tsy rariny, marary, tsy an’asa, nidonam-pahoriana, na manana olana hafa mampitebiteby sy mampalahelo. Na ny mpanompon’i Jehovah aza mety ho kivy ka tsy ho faly intsony. Raha izany no manjo anao, dia inona no hanampy anao ho falifaly indray?
Inona anefa aloha no atao hoe fifaliana? Inona no nanampy ny olona sasany ho faly foana na dia nanana olana aza izy? Inona no azontsika atao mba ho faly foana isika, ary ho faly kokoa mihitsy aza?
NY ATAO HOE FIFALIANA
Tsy zavatra miseho etỳ ivelany fotsiny ny fifaliana. Haka ohatra isika hanazavana an’izany. Ny olona iray rehefa mamo, dia mety hitsikanikany be. Tsy maharitra anefa izany. Rehefa misava mantsy ny toakany, dia tsy mihomehy intsony izy satria mbola eo ny olana rehetra mahazo azy. Tsy tena fifaliana àry no tsapany.—Ohab. 14:13.
Fihetseham-po lalina ny fifaliana. Mahatsapa azy io ny olona rehefa nahazo na manantena hahazo zavatra tsara. Mahatsiaro ho sambatra foana ny olona faly, na mandeha tsara ny fiainany na tsia. (1 Tes. 1:6) Faly foana izy na misy zavatra mampitebiteby be azy aza. Nokapohina, ohatra, ny apostoly satria nitory momba an’i Kristy. Rehefa “niala teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy” anefa izy ireo, dia “faly satria natao mendrika ny ho afa-baraka noho izany anarany izany.” (Asa. 5:41) Tsy hoe nahafaly azy ireo akory ilay nokapohina. Faly kosa izy ireo fa nahavita tsy nivadika tamin’i Jehovah.
Tsy hoe vao teraka isika dia efa ananantsika io fifaliana io. Tsy tongatonga ho azy koa izy io. Vokatry ny fanahy masin’Andriamanitra mantsy ny fifaliana. Rehefa ampian’ny fanahy masina isika, dia lasa manana “ny toetra vaovao”, anisan’izany ny fifaliana. (Efes. 4:24; Gal. 5:22) Lasa mahay miatrika kokoa ny olana mahazo antsika isika, rehefa manana an’io fifaliana io.
MODELY AZONTSIKA TAHAFINA
Tian’i Jehovah hahafinaritra ny fiainana eto an-tany, fa tsy ho ratsy be hoatran’ny hitantsika amin’izao. Faly foana anefa izy na dia manao ratsy aza ny olona sasany. Hoy ny Baiboly: “Hery sy fifaliana no ao amin’ny fonenany.” (1 Tan. 16:27) Faly koa izy mahita ny zavatra tsara ataon’ny mpanompony.—Ohab. 27:11.
Afaka manahaka an’i Jehovah isika, ka tsy hiferinaina be rehefa tsy araka izay nieritreretantsika azy ny zavatra sasany. Aleo mifantoka amin’ny zavatra tsara efa ananantsika. Tadidio foana koa ireo zavatra tsara hitranga amin’ny hoavy, ary manàna faharetana eo am-piandrasana an’izany. *
Misy ohatra maro azo tahafina koa ao amin’ny Baiboly. Anisan’izany i Abrahama. Niatrika olana be dia be izy noho ny nataon’ny olona, ary efa saika maty mihitsy aza. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Faly foana anefa izy. Ahoana no nataony? Notadidiny tsara foana hoe mbola hiaina ao amin’ny tontolo vaovao izy, rehefa hanjaka ny Mesia. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) Hoy i Jesosy: “Ravoravo erỳ i Abrahama rainareo noho ny fanantenana hahita ny androko.” (Jaona 8:56) Manaova àry hoatran’i Abrahama. Saintsaino ny zavatra mahafinaritra mbola hitranga amin’ny hoavy.—Rom. 8:21.
Nitadidy foana ny fampanantenan’Andriamanitra koa ny apostoly Paoly sy Silasy. Nanana finoana matanjaka izy ireo, ary faly foana na mafy aza ny nanjo azy. Nokapohina mafy, ohatra, izy ireo indray mandeha ary nogadraina. Inona anefa no nataony taorian’izay? “Nivavaka sy nihira fiderana ho an’Andriamanitra” izy ireo, “rehefa tokony ho misasakalina.” (Asa. 16:23-25) Nahazo hery izy roa lahy satria nitadidy ny fanantenany. Faly koa anefa izy ireo, satria fantany hoe enjehina izy noho izy manara-dia an’i Kristy. Afaka manahaka an’i Paoly sy Silasy isika, ka mitadidy foana hoe inona no vokatra tsara azo rehefa tsy mivadika amin’i Jehovah isika.—Fil. 1:12-14.
Be dia be koa amin’izao ny rahalahy sy anabavy faly foana na dia manana olana aza. Nisy rivo-doza mahery atao hoe Haiyan, ohatra, tany Philippines tamin’ny Novambra 2013, dia tranona rahalahy sy anabavy 1 000 mahery no rava. Anisan’izany ny tranon’i George, any Tacloban. Hoy izy: “Mbola faly foana ny mpiara-manompo atỳ, na dia teo aza ireny zava-nitranga ireny. Tsy hitako izay hilazana ny hafalianay!” Ho faly foana koa isika na dia manana olana lehibe aza, raha misaintsaina sy mankasitraka an’izay rehetra nataon’i Jehovah ho antsika. Mbola misy zavatra hafa ataon’i Jehovah koa anefa mba hanampiana antsika ho faly.
INONA AVY NO MAHAFALY ANTSIKA?
Ny fifandraisantsika amin’i Jehovah no mahafaly antsika indrindra. Mba eritrereto ange e! Mahafantatra an’ilay Mpanjakan’izao Rehetra Izao isika. Izy koa no Andriamanitra ivavahantsika sy Raintsika ary Namantsika.—Sal. 71:17, 18.
Faly koa isika fa omen’i Jehovah aina sady afaka mankafy fiainana. (Mpito. 3:12, 13) Tsy vitan’izany fa notaomin’i Jehovah hanompo azy isika, ka lasa mahafantatra ny sitrapony. (Kol. 1:9, 10) Lasa misy dikany àry ny fiainantsika ary fantatsika izay tokony hatao. Tsy hoatr’izany ny ankamaroan’ny olona. Hoy i Paoly: “‘Tsy hitan’ny maso na ren’ny sofina, na nitsiry tao am-pon’ny olona ny zavatra nomanin’Andriamanitra ho an’izay tia azy.’ Fa tamintsika no nampihariharian’Andriamanitra izany tamin’ny alalan’ny fanahiny.” (1 Kor. 2:9, 10) Tsy faly ve isika mahalala ny sitrapon’i Jehovah sy izay hataony amin’ny hoavy?
Tsy izay ihany no ataon’i Jehovah. Mamela ny fahotantsika koa izy. (1 Jaona 2:12) Mamindra fo izy, ka afaka manantena isika hoe tsy ho ela dia hiaina ao amin’ny tontolo vaovao. (Rom. 12:12) Na amin’izao aza isika dia efa omen’i Jehovah namana hiaraka amintsika hanompo azy. (Sal. 133:1) Miaro antsika amin’i Satana sy ny demonia koa izy. (Sal. 91:11) Ho faly kokoa isika raha misaintsaina an’ireny fitahiana omen’i Jehovah ireny.—Fil. 4:4.
INONA NO AZONTSIKA ATAO MBA HO FALY KOKOA ISIKA?
Na efa faly aza isika, dia mbola azontsika ampitomboina ny fifaliantsika. Hoy mantsy i Jesosy: “Lazaiko aminareo izany mba ho ao aminareo koa ny fifaliako, ary mba ho feno ny fifalianareo.” (Jaona 15:11) Hoatran’ny afo ilay izy. Mila ampiana kitay ny afo raha tiana hirehitra kokoa. Hoatr’izany koa ny fifaliana. Mila manao zavatra ara-panahy bebe kokoa ianao raha te hampitombo ny fifalianao. Tadidio fa ny fanahy masina no manampy antsika ho faly. Mangataha àry fanahy masina matetitetika ary saintsaino foana koa izay vakinao ao amin’ny Baiboly, dia ho faly kokoa ianao.—Sal. 1:1, 2; Lioka 11:13.
Hitombo koa ny fifaliantsika, raha mazoto manao zavatra mampifaly an’i Jehovah isika. (Sal. 35:27; 112:1) Velona mba hanao ny sitrapony mantsy isika. Milaza ny Baiboly hoe noforonina mba ‘hatahotra an’Andriamanitra’ isika ka ‘hitandrina ny didiny.’ “Izany no adidy tokony hataon’ny olombelona.” (Mpito. 12:13) Ny manompo an’i Jehovah àry no mahafaly indrindra. *
NY VOKATRY NY FIFALIANA
Raha miezaka ny ho faly kokoa isika, dia hahazo fitahiana hafa. Hankasitraka kokoa antsika, ohatra, i Jehovah, satria faly isika manompo azy na inona na inona olana mahazo antsika. (Deot. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Tsy ho variana amin’ny vola sy ny fananana koa isika, rehefa mahatsiaro ho faly. Vao mainka aza isika ho vonona hamoy zavatra betsaka kokoa mba hanompoana an’i Jehovah. (Mat. 13:44) Rehefa hitantsika hoe misy vokany tsara izany, dia vao mainka isika ho faly sy ho afa-po ary hanampy ny olon-kafa ho sambatra kokoa.—Asa. 20:35; Fil. 1:3-5.
Azo inoana koa hoe ho salama kokoa ianao, rehefa mitombo ny fifalianao. Hoy mantsy ny Ohabolana 17:22: “Ny fo falifaly dia sady mahasoa no manasitrana.” Mifanaraka amin’izany ny vokatry ny fikarohana nataon’ny manam-pahaizana iray any amin’ny Oniversiten’i Nebraska, any Etazonia. Hoy izy: “Azo inoana kokoa hoe ho salama ny olona iray amin’ny hoavy, raha izao izy dia efa faly sy afa-po amin’ny fiainany.”
Afaka ny ho faly foana àry isika rehefa mahazo fanahy masina, na dia tsy mora aza ny fiainantsika. Hahazo fanahy masina isika, raha mivavaka sy mianatra ny Tenin’Andriamanitra ary misaintsaina an’izay nianarantsika. Vao mainka ho faly koa isika raha misaintsaina ny fitahiana efa azontsika, manahaka ny olona manam-pinoana, ary miezaka manao ny sitrapon’i Jehovah. Raha manao an’ireo isika, dia ho tanteraka amintsika ny Salamo 64:10 hoe: “Hifaly amin’i Jehovah ny olo-marina, ka hialoka aminy tokoa.”
^ feh. 10 Mbola horesahina ao amin’ity andian-dahatsoratra ity any aoriana any ny hoe fahari-po na faharetana.
^ feh. 20 Misy soso-kevitra hafa hanampy anao ho faly kokoa ao amin’ilay hoe “ Te ho Faly Kokoa ve Ianao?”
Te ho Faly Kokoa ve Ianao?
Miezaha hanana fiainana tsotra foana.—Lioka 12:15.
Aza manantena be loatra hoe hifanaraka amin’izay eritreretinao ny zava-drehetra.—Mika 6:8.
Aza avela hisakana anao tsy hanatratra tanjona ara-panahy ny fandaharam-potoananao (ohatra hoe ny asa, fianarana, fialam-boly, sns.).—Efes. 5:15, 16.
Aza mitaky be loatra amin’ny tenanao sy ny olon-kafa.—Fil. 4:5.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2018
Toetra Faran’izay Tsara ny Fitiavana